အိပ်မက်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သင်သိထားသင့်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက် (၁၅)ချက် - Lifestyle Myanmar
တစ်ချို့လူတွေက အမြဲတမ်း အိပ်မက်မက်ပြီး တစ်ချို့တွေက ဘာ့ကြောင့်အိပ်မက် မမက်တာလဲ? (သို့) ညတိုင်း ငါတို့ဘယ်လောက်အထိ အိပ်မက် မက်ခဲ့ကြသလဲ?လို့ စဉ်းစားဖူးပါသလား။ ဒီဆောင်းပါးမှာ အိမ်မက်နှင့် ပတ်သတ်ပြီး သင်သိထားသင့်တဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အချက်တွေကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
၁။ ကျွန်မတို့အားလုံး အိပ်မက် မက်ကြပါတယ်
နံနက်ခင်းမှာ သင့်အိမ်မက်ကို သင်မှတ်မိသည်ဖြစ်စေ၊ မမှတ်မိသည်ဖြစ်စေ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ အချို့လူတွေက အိမ်မက် ၁ခု၊ ၂ခု (သို့) အိမ်မက်တွေအများကြီးကို သတိရနိုင်ကြပြီး တစ်ချို့လူတွေကတော့ မှတ်မိနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။
မှတ်ချက်- REM disorder ရှိသူတွေဟာ ညအချိန်မှာ အိမ်မက် မမက်ပါဘူး။ သို့သော် ဒီလိုလူမျိုး ရာခိုင်နှုန်းဟာ အရမ်းနည်းပါတယ်။
၂။ “sleep paralysis”(ဘီလူးစီးခြင်း) လို့ခေါ်တဲ့ အခြေအနေ ရှိပါတယ်
ဒါက အိမ်မက်ဆိုးမဟုတ်ဘဲ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတွေ ခံစားနေရသော အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ “sleep paralysis”(ဘီလူးစီးခြင်း)ဟာ လူကသိနေလျက်နဲ့ ခြေထောက်တွေ၊ လက်တွေ လှုပ်လို့မရ၊ အော်မရတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါ။ များသောအားဖြင့် အိပ်တစ်ဝက်၊ နိုးတစ်ဝက် အခြေအနေကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကျွန်မတို့ဘဝရဲ့ အိမ်မက်သက်တမ်းက ၆နှစ်ခန့်ရှိပါတယ်
ဒါက နေ့ခင်းအိမ်မက်မက်တဲ့ အချိန်မပါသေးပါဘူး။ ကျွန်မတို့ဟာ ညတိုင်း ၅မိနစ်မှ မိနစ် ၂၀ကြားကာလမှာ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အိပ်မက်မက်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ၎င်းကို လက်ရှိသက်တမ်းနှင့် တွက်ချက်ပါက လူတွေဟာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၆နှစ်ခန့်အိမ်မက် မက်နေကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။
၄။ ကျွန်မတို့ နိုးပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ အိမ်မက်ကို မေ့သွားတတ်ကြပါတယ်
အိမ်မက်တွေကို အလွယ်တကူ မေ့လျော့တတ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို သင့်အိမ်မက်အကြောင်း ပြောပြဖို့ ကြိုးစားနေရင်း အဲ့အိပ်မက်ကို သင့်စိတ်ထဲမှာ သတိမရတော့တာကို ကြုံခဲ့ဖူးပါသလား? အချက်အလက်ဖြစ်စဉ်နှင့် မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာ သိုမှီးပုံက ကျွန်မတို့အိပ်မက် မက်တဲ့နည်းအတိုင်း မတူလို့ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အချို့လူတွေက ဖြစ်ပျက်မယ့် အရာတွေကို အိမ်မက်မက်ပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်။ သတိပေးချက်တွေအကြောင်း ပြောနေတာပါ။ ဒါက သိပ္ပံနည်းကျ ရှင်းလင်းချက် မရှိသေးသော်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေကို အိပ်မက်မက်ခဲ့သူတွေရှိပါတယ်။ ဥပမာ
အေဗရာဟင်လင်ကွန်းဟာ သူလုပ်ကြံခံရမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အိမ်မက်မက်ခဲ့တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
တိုက်တန်းနစ်အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တစ်ချို့လူတွေ အိပ်မက်မက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အမွှာမျှော်စင်ပေါ်မှာ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသူအချို့က ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ ကပ်ဘေးတစ်ခုအကြောင်းကို အိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
၆။ သမိုင်းရဲ့ အကျော်ကြားဆုံးတီထွင်မှုအချို့က အိမ်မက်တွေအပေါ် အခြေခံပါတယ်
တီထွင်သူတစ်ချို့ဟာ သူတို့ရဲ့အိပ်မက်တွေအပေါ် အခြေခံပြီး လူသားတွေကို ပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဥပမာ- ဂူဂဲလ်ဖန်တီးသူ Larry Page၊ DNA ရဲ့ helix နှစ်ဆကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ James Watson၊ အပ်ချုပ်စက်တီထွင်သူ Elias Howe တို့ရဲ့အိုင်ဒီယာဟာ သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ပေါ်မှာ အခြေခံပါတယ်။
၇။ အမျိုးသားတွေရဲ့ အိမ်မက်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးအိပ်မက်တွေက ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်
လေ့လာမှုအချို့အရ အမျိုးသမီးတွေဟာ အများအားဖြင့် မိသားစုနှင့် သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းကို အကျွမ်းတဝင်ရှိသော အခြေအနေများမှာ အိပ်မက်မက်သော်လည်း အမျိုးသားတွေကတော့ အခြားယောကျ်ားလေးတွေနဲ့ ရန်လိုသော တွေ့ဆုံမှုများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပိုမိုရန်လိုတဲ့ အိပ်မက်တွေကို မက်လေ့ရှိကြပါတယ်။
၈။ သင့်ဦးနှောက်က ညအချိန်မှာ အနားမယူပါဘူး
ကျွန်မတို့ဟာ အိပ်စက်အနားယူခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်း အခိုက်အတန့်ကို ဆက်စပ်ကြည့်လေ့ရှိပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ဟာ “shuts down” လုပ်ထားတယ်လို့ ထင်မိကြပါတယ်။ သို့သော် ဒါကမမှန်ပါဘူး၊ ကျွန်မတို့ အိပ်နေစဉ်မှာ ဦးနှောက်က active ဖြစ်တာကြောင့် ကျွန်မတို့ အိပ်မက်မက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
၉။ အချို့လူတွေက အဖြူ၊ အမည်းနဲ့ အိပ်မက်မက်ကြပါတယ်
များသောအားဖြင့် ကျွန်မတို့ဟာ အရောင်တွေနဲ့ အိပ်မက်မက်ကြပါတယ်။ သို့သော် အချို့လူတွေကတော့ အဖြူ၊ အမည်းရောင်ဖြင့်သာ မက်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ သင်ဟာ အထီးကျန်နေတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေမှာ အဖြူ၊ အမည်းများနဲ့ အိပ်မက်မက်နိုင်ပါတယ်။
၁၀။ လူအများစုက အိပ်မက်ထဲမှာ ဖတ်လို့မရပါဘူး
သင်စာဖတ်နေတဲ့ အိပ်မက်တွေကို မက်ဖူးပါသလား? ဒါမှမဟုတ် သင် စာမေးပွဲဖြေတော့မယ့်နေရာကို မက်ဖူးပါသလား? အိပ်မက်ထဲက စက္ကူအပိုင်းအစတစ်ခုကို ဖတ်ကြည့်ခြင်းက ရိုးရှင်းတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ လူအများစုက မလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် စာမေးပွဲကျတဲ့ အိမ်မက်တွေ မက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကို ဖတ်တဲ့အခါမှာလည်း အလားတူပါပဲ။
၁၁။ တိရိစ္ဆာန်တွေလည်း အိပ်မက်မက်နိုင်ပါတယ်
ဒါက သက်သေပြနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။( တကယ်တော့ ဒါကို သက်သေပြဖို့ အရမ်းရှုပ်ထွေးပါတယ်။) သို့သော် တိရိစ္ဆာန်တွေဟာ အိပ်မက်မက်တယ်လို့ သံသယရှိနေကြပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခွေးက အိပ်နေစဉ် ခြေသည်း၊ လက်သည်းတွေ ကုတ်ခြစ်နေပြီး ညည်းနေတာကို မြင်ဖူးပါသလား။ သူတို့အိပ်မက်မက်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၁၂။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင့်အိမ်မက်တွေ လမ်းပြနိုင်၊ ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်
ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အိမ်မက်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ အိပ်မက် မက်နေတဲ့ အရာတွေကို သတိပြုမိစေပြီး အိပ်မက်ကို တနည်းနည်းဖြင့် ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။
၁၃။ ကျွန်မတို့ဟာ ကောင်းတဲ့အရာထက် မကောင်းတဲ့အရာသာ အိပ်မက်မက်ကြပါတယ်
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ မသိကြပါဘူး။ သို့သော် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအမျိုးမျိုးအရ မကောင်းတဲ့အိပ်မက်တွေက ကောင်းတဲ့အိပ်မက်တွေတထက် မကြာခဏ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်လို့ ကောက်ချက်ချကြပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေမှာ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းစတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေက ပျော်ရွင်မှု၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာထက် ပိုပြီးတွေ့ရပါတယ်။
၁၄။ မျက်စိမမြင်တဲ့သူတွေလည်း အိပ်မက်မက်ပါတယ်
မျက်စိမမြင်သူတွေလည်း အိပ်မက်မက်ပါတယ်၊ သူတို့ဟာ ရုပ်ပုံအိပ်မက်တွေ များစွာကို မက်တတ်ကြပါတယ်။
၁၅။ ကျွန်မတို့ မြင့်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ မျက်နှာတွေကိုသာ အိပ်မက်မက်ကြပါတယ်
သင့်ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် ရန်ပြုသူရဲ့မျက်နှာကို မြင်နိုင်ပြီး အမြဲတမ်း အလိုက်ခံရတာ၊ တိုက်ခိုက်ခံရတာကို အိပ်မက်မက်ရင် ဒါက တစ်နေရာရာမှာ သင်မြင်ခဲ့ဖူးသူ(သို့) သင်သိတဲ့သူ တစ်ယောက်ယောက် ဖြစ်မှာပါ။